ံhosting ဆိုတာကတော့ မိမိရေးသားထားသော Website / Web Application များကို Setup and Configuration ပြုလုပ်ပြီး Run လို့ရနိုင်သည့် OS တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Hosting သည် Server OS အမျိူး အစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိတို့ Local PC များကဲ့သို့ OS အမျိူးအစား Machicne တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။
Window OS များတွင်လည်း Desktop Version and Server Version ဆိုတာရှိပြီး Linux OS များတွင်လည်း Desktop Version and Server Version ဆိုပြီးခွဲခြားတည်ရှီကြပါသည်။ Local တွင် Website / Web Application ကို Development လုပ်ပြီးသည့် သည့် အခါတွင် Real Live Webiste / Web Application အနေဖြင့် Run နေရန်အတွက် မိမိတို့ Website / Web Application ကို Hosting Server တစ်ခုခုထဲတွင် Host လုပ်ပေးရပါမည်။
Shared Hosting, VPS ဆိုတာဘာလဲ ?
Hosting လို့သည်နေရာတွင် Shared Server, VPS, Dedicated Server လားဆိုပြီးရွေးချယ်ကြရပါသည်။
Shared Hosting ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က Hosting တစ်ခုကိုဝယ်ယူထားပြီး Software ဖြင့် အကန့်ခွဲ အပိုင်းခွဲရောင်းချသည်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုသည့် Hosting အမျူးိးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဈေူးနှုံးအားဖြင့် သက်သာစေပြီး မိမိမှ System တစ်ခုလုံးရဲ့ Whole Configuration များကို ကိုယ်တွင်ခွင့် မရှိကြပါ ( ယျေဘူယျ အားဖြင့် )။ ( မိမိ ဝယ်ယူလိုက်သော Hosting Service ပေါ်မူတည်ပါတယ် )
VPS ဆိုတာကတော့ Virtual Private Server ဖြစ်ပါတယ်။ Physical Server အဖြစ် တည်ရှိမနေဘဲ Virtual Server အဖြစ်တည်ရှိနေပါသည်။
အားသာချက်အနေနှင့် မိမိ Server တစ်ခုလုံးကို မိမိကိုယ်တိုင် ချယ်လှယ်ခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားနည်းချက်အနနေဖြစ့် မိမိကိုယ်တိုင် အစအဆုံး Setup, Instalaltion, Configuration and Security ကို ထိန်းသိန်းပေးရခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ( မိမိဝယ်ယူလိုက်သော VPS Service ပေါ်မူတည်ပါတယ် )
ထို VPS ထဲတွင်လည်း မိမိရဲ့ Local Machine ကဲ့သို့ Web Server ( eg. Apache, Nginx ), PHP, DataBase ( eg. MySql ) စသည့် Service များကို သင့်လျော်သလို Install and Configuration ပြုလုပ်ပြီး မိမိတို့ ရေးသားခဲ့သည့် Website / Web Application များကို Setup and Configuration များပြုလုပ်ပြီး Live Server များအဖြစ် Online မှ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးကြရပါသည်။